ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘီးအဖွဲ့ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) - rayhab ဖြစ်ပါသည်
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကုန်စည်နဲ့စည်းဝေးပွဲလုပ်ငန်းခွင်၏ရေဒီယို Relay မျှော်စင်အင်တင်နာပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များ TSI wheelset ဧည့်ခံလူထုဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 333252
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818-1299-1300-1301 - 3462235051
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ticaret@tudemsas.gov.t
ဘီးသင့်လျော်သော TS 600 ပမာဏသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်
ခ) တည်နေရာ: နိုင်ငံခြားရေးလေလံဆွဲသူများသည်များအတွက်အိမ်တွင်းလေလံဆွဲသူများသည်TÜDEMSAŞ-SİVASများအတွက်အထွေထွေညွှန်ကြားမှု: DDP Paid (ပို့ပြီး Duty) TÜDEMSAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှု-SİVAS
ဂ) Delivery နေ့စွဲ: ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားလေလံ, ပထမဦးဆုံးအသုတ်၏အက္ခရာ၏အဖွင့်ဖို့နောက်ဆက်တွဲ 150 နေ့ရက်ကာလ၌ wheelsets, နောက်ဆက်တွဲ 60 ကာလ၏ပထမဦးဆုံးအသုတ်အတွက်ဖြစ်ဖို့အားလုံးကိုထဲမှာ 150 ရက်အကြာမှာဖွင့်လှစ်ရမည်နှစ်ခုညီမျှသုတ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်၏အက္ခရာစုစုပေါင်း၏ဒုတိယအသုတ်တဦးတည်းပါတီထဲမှာကယ်နှုတ်တော်မူ၏လိမ့်မည်။
က) Place: ညွှန်ကြားမှု-အထွေထွေTÜDEMSAŞတင်ဒါကော်မရှင်အစည်းအဝေးခန်း-SÝVAS
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 10.09.2019 - 14: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖျက်သိမ်းဘီးအဖွဲ့နှင့် Monoblock ဘီးဝယ်ယူရကြလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) လေလံပွဲ 04 / 04 / 2017 ရေးအဖွဲ့ Monoblock ဘီးနှင့်တာယာတူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) monobloc ဘီး set wheel နှင့်ဧည့်ခံလူထုဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 122318 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 SÝVASဗဟို / SİVASခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 / 4683-4699 - 3462235051 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https: //ekap.kik ihale@tudemsas.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည် .gov / ECAP / 2-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: နည်းပညာဆိုင်ရာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တာယာများနှင့်ဘီးခန္ဓာကိုယ် Kit ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) 11 / 07 / 2014 တာယာများနှင့်ဘီးခန္ဓာကိုယ် Kit တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) လွှာမှဘီးအစုံနှင့်ဘီးခန္ဓာကိုယ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 61959 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 SÝVASဗဟို / SİVASခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 / 4683 / 4699 - 3462235051 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https: //ekap.kik ihale@tudemsas.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည် .gov / ECAP / 2-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: နည်းပညာဆိုင်ရာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘီးများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဘီးအလိုတော်ခန္ဓာကိုယ် (TÜDEMSAŞ) 07 / 05 / 2015 ဘီးနှင့်ဘီးအိမ်ယာ၏ set တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) လွှာမှဘီးအစုံနှင့်ဘီးခန္ဓာကိုယ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 47928 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 SÝVASဗဟို / SİVASခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 / 4699-4683 - 3462235051 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https: //ekap.kik ihale@tudemsas.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည် .gov / ECAP / 2-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: နည်းပညာဆိုင်ရာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘီးအဖွဲ့နှင့် Monoblock ဘီးဝယ်ယူရကြလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) 29 / 05 / 2017 ရေးအဖွဲ့ Monoblock ဘီးနှင့်တာယာတူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) monobloc ဘီး set wheel နှင့်ဧည့်ခံလူထုဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 229872 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 SÝVASဗဟို / SİVASခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 / 4683-4699 - 3462235051 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https: //ekap.kik ihale@tudemsas.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည် .gov / ECAP / 2-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: နည်းပညာဆိုင်ရာ ...
TÜDEMSAŞ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, Wheelset ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
တူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကို (TÜDEMSAŞ)
12 58030 TÜDEMSAŞ Sivas / တူရကီ: KADIBURHANET MAHALLESİစက်ရုံလမ်းပေါ်မှမလုပ်ခဲ့တယ် Sivas 58030 Türkiye + Google Maps ကို
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖျက်သိမ်းဘီးအဖွဲ့နှင့် Monoblock ဘီးဝယ်ယူရကြလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) လေလံပွဲ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တာယာများနှင့်ဘီးခန္ဓာကိုယ် Kit ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘီးများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဘီးအလိုတော်ခန္ဓာကိုယ် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘီးအဖွဲ့နှင့် Monoblock ဘီးဝယ်ယူရကြလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တာယာများနှင့်ဘီးခန္ဓာကိုယ် Kit လက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တာယာများနှင့်ဘီးအောကျခံခုံ Kit (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 920 မီလီမီတာ O ဘီးအစုံဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)